admin – paradeskhabar.com
क’पाल झर्ने स’मस्याबाट धेरै मानिसहरु चिन्तित हुन्छन् । विभिन्न कारणले क’पाल झर्ने स’मस्या पैदा हुन्छ । तर, गम्भीर रो’गका कारण क’पाल झर्ने स’मस्यामा बाहेक घरेलु विधि अपनाएर यसको स’माधान गर्न सकिन्छ । अमलाको जुस: अमलामा ट्यानिन र क्या’ल्शियम जस्ता पदार्थ पाइन्छ । यो दुवै पदार्थ कपाल बढ्न मद्दतगार हुन्छ । र यो क’पालको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । कपालको जरामा अमलाको रस लगाउनुस् र ३० मिनेटसम्म लगाउनुस् । यो प्रक्रिया हप्तामा दुईपटक लगाउनुस् । प्याजको रस: प्याजको रसले क’पालमा यसको वृद्धिका लागि अतिरिक्त सल्फर प्रदान गर्छ । जसले गर्दा कपाल झर्न रोक्ने काम गर्छ । आधा प्याजको रस निकाल्ने र कपालको जरामा लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखाल्ने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा दुई पटक गर्दा क’पाल झर्ने स’मस्यामा कमि आउँछ । मेथी हेयर मास्क: मेथीको दानामा प्रोटिन र निकोटिनिक एसिडको मात्रा उच्च मात्राम
नेकपा (ओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिड्ने भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो । ‘ओली त्यस्ता मान्छे हुन् मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँड्छन्। मान्छे दंग पर्छन् । बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको हारेको, सन्नाटा भएर के गर्ने भनेर सोच्दै जानुपर्नेमा पञ्चे बाजा बजाएर, जितेजसरी गए। कति करोड खर्चेर मानिस बोलाएको थाहा पाएँ मैले, यस्तो नाटक गर्ने तिनी।’ अध्यक्ष प्रचण्डले र्मा ओलीको निरंकुशता थाहा पाएपनि केही साथीहरुले आफूलाई आत्मसमर्पण गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेकपा एमालेले मदन भण्डारी र एमालेको लोगो भएपछि एमाले भनिरहेको भन्दै एमालेको कुनै सिद्धान्त नरहेको बताउनुभयो । ओलीले आफूले मनपरी गरेर आरुलाई दोष दिने गरेको
काठमाडौ । एउटा मोवाइल एप टिकटक जसवाट मानिसले लाखौं करोडौ कमाउन सक्छन् भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । एक दिनमै करिब एक लाख रुपैया कमाउने अंशु वर्माको कथाले पक्कै पनि तपाईलाई अचम्म बनाउन सक्ला । यिनी टिकटकमा लाइभ आएर लाखौं कमाउने गरेका हुन् । उनी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका हुन् । उनी आफ्नै घरको कोठामा बसेर दिनमै लाख भन्दा बढी कमाउँछन् ।उनी महिनाको २५ लाख भन्दा बढी कमाउँछन् । कम्तिमा महिनाको २० देखि २५ सम्म पुग्ने गरेको छ । तर कहिले काँही ३० लाख पनि पुग्ने गरेको बताउँछन् । उनले २५ दिन टिकटकमा लाइभ बसेर कमाएको पैसाले कार पनि किनेका छन् । केही दिन अघि सामान्य जिवनशैली बिताएका उनी अहिले महेन्द्रनगरमा एउटा घर किनिसकेका छन् भने काठमाडौमा पनि घर किनिसके । उनीसंग जम्मा ७ वटा मोवाइल छन् । आफ्नै कोठामा बसेर उनले दुई महिनामै जिवनशैली परिवर्तन गरे । उनको कोठा पनि भब्य छ । घरमा सबै सुविधा जोडे
: चिसो भुइँमाथि पातलो खु’इलिएको म्याट । बुढ्यौलीले शरीर दिनप्रतिदिन चाउरिँदैछ । शरीर ढाक्ने कपडा छ न पानीबाट ओत लाग्ने गतिलो छाप्रो नै । ८९ वर्षीय राउटे कर्णबहादुर शाहीका दुःख यतिमात्र छैनन्, उहाँलाई लामो समयदेखि हाडजोर्नी दुख्ने समस्याले सताएको छ । अरुको साहारा बिना उठबस गर्न सक्नुहुन्न । फिरन्ते राउटे समुदाय पहिले डाक्टरी उपचारमा त्यति विश्वास गर्थेनन् तर पछिल्ला केही वर्षयता भने उनीहरुको यो धारणा क्रमशः बदलिएको छ । कर्णबहादुरले पनि शुक्रबार बस्तीमा पुगेको एक सरकारी टोलीसँग उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । “बिमारले थलिएको धेरै भइसक्यो, औषधि–उपचार पाए हुन्थ्यो”, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना नेतृत्वको टोलीसँग भन्नुभयो, “जीउ दुखेर हैरान बनायो, औ’ष’धि खा’ए निको हुन्थ्यो की ? डाक्टरलाई यतै (बस्तीमै) पठाइदिनुप¥यो ।” स्थायी बसोबास, आधुनिक उपचार पद्धति, शिक्षा, कृ
आज मिति २०७८-०६-०४ गते सोमबार कस्तो होला त तपाईंको आजको दिन हेर्नुस ज्योतिष राशिफल अनुसार। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आजको दिन मेष राशिका लागि भने सानो प्रयासले पनि रोकिएको काम बने योग रहेको छ । भने आजको दिन लामो दुरिको यात्रा हुने योग रहेको छ। भने घरायसी समस्याले सताए पनि गरेका काम सफल हुनाले मन सन्तुष्ठ रहने छ । आफन्तहरुको सहयोग पनि प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्ल हुनेछ । वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) यी राशिका लागि भने आजको दिनमा भौतिक साधनका पनि क्षति हुने सम्भावना रहेको छ भने काममा ढिला सुस्ती आउनुका साथै आर्थिक हानी हुन सक्छ, सावधान रहनु होला । । रुपैँया पैसा भने खर्च गर्नुपर्नेछ । शरिरमा सामान्य रोग देखा परि केही समस्याले सताउन सक्ला । मिथुन का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को मिथुन राशिका लागि भने आजको आटेको काम बन्ने योग रहेको छ भने मन लाएर काम गर्नु होला । टाढिएका आफन्तको
संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई) ले युएई छोडेको ६ महिना कटेकाहरुलाई पुन: युएई प्रवेश सहज बनाएको छ । तर त्यसरी जानेहरुले कोभिड १९ विरुद्दको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने छ भनें भिसाको म्याद कायम हुनुपर्नेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आज (सेप्टेम्वर १२) देखि प्रवेश सहज बनाउने जानकारी युएईको सम्वन्धित सरकारी निकायले दिएको छ । ईमिरेट्स न्यूज एजेन्सी (वाम) का अनुसार भिसाको म्याद बाँकी रहेका, खोपको मात्रा पूर्ण लगाएकाहरुलाई युएई छोडेको ६ महिना कटेको भएपनि प्रवेश दिईने भएको हो ।यस अगाडी गत अगष्ट ५ देखि कोभिड १९ विरुद्दको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरुलाई युएई प्रवेशमा सहज बनाइएको भएपनि युएई छोडेको ६ महिना कटिसकेकाहरुका सम्वन्धमा भनें के गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन । युएई छोडेपनि कोभिडका कारण फर्किन नपाएकाहरुलाई नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ । युएईका जिम्मेवार निकायहरु एनसिईएमए तथा आइसिएले गरेको निर्
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य उनीहरु जन्मेको समय, हरेक बच्चाको नाम उसको जन्म समय, दशा नक्षत्र, र ग्रहको स्थितिको हिसाबबाट राख्ने गरिन्छ। त्यसैले राशिले व्यक्तिको जीवनमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ । राशिअनुसार यो कुरालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि कुन व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुनेछ ? व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कति प्रगति गर्नेछ ? यस्तै तरिकाले ज्योतिषशास्त्रमा ४ राशिका व्यक्ति यस्ता रहेका छन् कि जो सौभाग्यशाली हुन्छन् । यस्ता राशि भएका व्यक्ति सामान्य परिवारमा जन्म लिएर पनि शानदार प्रगति गर्न सक्षम हुन्छन्। यिनीहरुलाई धनी बन्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन्। स्थिति र नक्षरको हिसाबबाट तोक्न सकिन्छ। आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि ? मेष राशि: राशिमा सबैभन्दा पहिलो राशि मेषको स्वामी भनेर मंगल ग्रहलाई मानिन्छ । मंगलको मेष राशिमा विशेष प्रभाव र कृपा रहन्छ। जसका कारण यो राशि भएका
बँदेल मार्न राखेको विद्युतीय पासोमा परि एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु
बँदेल मार्न राखेको विद्युतीय पासोमा परि एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। गएराति करिब १० बजेतिर बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एकै परिवारका तीन जनाको बँदेल मार्न राखेको करेन्टको पासोमा परेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भुरिगाउँका प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकायाका अनुसार करेन्टको पासोमा परेर ठाकुरबाबा नगरपालिका-३ का ३२ वर्षका बालकृष्ण थारु, उनकी श्रीमती २९ वर्षकी सुनिता थारु र बालकृष्णकी भाउजु ४३ वर्षकी बेलमती थारुको मृत्यु भएको हो। सुरुमा एक जनालाई करेन्ट लागेपछि बचाउने क्रममा अरु दुई जनालाई पनि करेन्ट लागेको प्रहरी निरीक्षक रोकायाले जानकारी दिए। बँदेललाई पासो थाप्ने स्थानीय ८३ वर्षीय राजबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज २ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर १८ तारीख भाद्र शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथी धनिष्ठा नक्षत्र सुकर्मा योग कौलव करण चन्द्रमा मकर राशिमा पश्चात कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु शनि प्रदोषव्रत इन्द्रध्वजोत्थान मतछोयके न्हुघया (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) कार्य क्षेत्रमा लगाईएको गलन सिलताको कदर हुने समय रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या उत्पन्न गर्न सक्नेछन । मध्यान पश्चात भने नयाँकार्यको थालनी तथा आम्दानीको क्षेत्र उत्तम रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) गैर ब्यक्तिको संगतले अपजसको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेश जानू अहिले घरबार बिगार्नु जस्तै भै सकेको छ । घर परिवारलाई राम्रोसगँ पालनपोषण गर्ने सोचले बिदेश गएका कतिपयको घर फर्किदा न परिवार हुन्छ न त कमाएको सम्पत्ति नै रहन्छ । यस्तै घटना छ अहिले संखुवासभाका तुलशी बिश्वकर्माको । उनकी श्रीमती लक्ष्मी बिश्वकर्मा बिगत एक वर्षदेखि छोराछोरी त्यसै छाडेर बेपत्ता भएकी छिन । तुलशी घर आइ नपुगी नै उनी बेपत्ता भएको तुलशी बताउँछन । संखुवासभाको मादी नगरपालिका १ का तुलशी बिश्वकर्मा बिदेशबाट घर आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । कोरोनाका कारण बिदेशबाट घर फर्किदा अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने नियम भएकाले उनी काठमाडौमा क्वारेन्टाइन मै बसेका थिए । त्यही बेला उनकी श्रीमती हिडेको उनले बताए । आफू घर आउदा छोराहरु त्यसै रुदैँ बसिरहेको आफुले भेटेको उनले बताए । आफुसगँ त्यस्तो केही मनमुटाव नभएको र आफू घर नै आइ नपुगी हिडेकोले किन हिड्यो भन्ने आफुल